Sonto 9 Meyi 2021
Mgqibelo 8 Meyi 2021
Yokwandisa Izindebe Zemvelo Osheshayo Imvelo
Yokwandisa Izindebe Zemvelo Osheshayo Imvelo I-Xtreme Lip-Shaper® System iyithuluzi lokuqala lokwenziwa lwezilonda elisetshenziswa ngokuphepha elifunyenwe ekhaya. Isebenzisa indlela yaseChinese 'yokubhonga' yaseShayina eneminyaka engu-3 500 - ngamanye amagama, ukubizwa - okuhambisana nobuchwepheshe obusezingeni eliphakeme bokujikisa izindebe ukukhulisa nokwandisa izindebe ngaso leso sikhathi. Idizayini yakheka kamnandi njenge-Angel-Jolie futhi ekhipha imithambo ephindwe kabili. Abasebenzisi bangathuthukisa i-lip ephezulu noma ephansi ngokuhlukile. Idizayini yakhelwe futhi ukukhulisa izingcezu zomnsalo weC Cupid, ugcwalise imigodi yezindebe zokuphakamisa amakhona omlomo wokuguga. Kufanele bonke ubulili.
Ushukela Ukuphuza itiye noma ukuphuza ikhofi akuyona nje ukucisha ukoma kanye. Kungumkhosi wokungenisa imali nokwabelana. Ukungeza ushukela ekhofi lakho noma kwewashi lakho kungaba lula njengoba ukhumbula izinombolo zamaRoma! Noma ngabe udinga isipuni esisodwa sikashukela noma amabili noma amathathu, kufanele ukhethe eyodwa yezinombolo ezintathu ezenziwe ushukela bese usifaka esiphuzweni sakho esishisayo / esibandayo. Isenzo esisodwa nenhloso yakho kuyaxazululwa. Akunasipuni, akunakulinganiswa, kutholakala ukuthi kulula.
Indlu Yangasese Yezinja
Indlu Yangasese Yezinja I-PoLoo iyindlu yangasese ezenzakalelayo ukusiza izinja ukuthi zihlale ngokuthula, noma ngabe isimo sezulu sikhona lousy ngaphandle. Ehlobo lika-2008, ngesikhathi seholide ngomkhumbi nezinja zomndeni ezi-3 u-Eliana Reggiori, umatilosi ofanelekayo, wasungula iPoLoo. Nomngani wakhe u-Adnan Al Maleh waklama okuthile okuzosiza hhayi kuphela impilo yezinja, kepha futhi ukuthuthukisa kulabo abanikazi asebekhulile noma abakhubazekile futhi abangakwazi ukuphuma endlini ngesikhathi sasebusika. Kuyazenzakalela, gwema ukuhogela futhi kulula ukuyisebenzisa, ukuyithwala, ukuyihlanza futhi ilungele labo abahlala emafulethini, kumnini we-motorhome nomnikazi wezikebhe, amahhotela nezindawo zokuhlala.
Tango Pouch Isikhwama, Isikhwama Sakusihlwa Mgqibelo 15 Meyi
1x3 Itafula Lekhofi Lwesihlanu 14 Meyi
Decor Isithombe Lwesine 13 Meyi
Amadivayisi Amaningi Atholakalayo Ayindlela Umbhede Wekati Yokwandisa Izindebe Zemvelo Osheshayo Imvelo Ushukela Indlu Yangasese Yezinja I-Birdhouse